सत्तारुढ नेकपाभित्र चलेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । खास भएको के हो ?
यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । अस्ति हामीले सचिवालय बैठक बसेर राष्ट्रियसभामा लैजाने एउटा सिट जो बाँकी छ, क्याबिनेटबाट प्रस्तावित गर्ने, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने त्यसमा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार वामदेव गौतम पठाउने भन्ने सुझाव दिइएको छ सरकारलाई । यो विषयलाई लिएर थोरै छलफल भएको मात्रै हो । यो अन्ततः हल हुन्छ ।
यो निर्णय किन विवादमा आयो त ?
यो आधिकारिक निर्णय भएको हो र त्यो सर्वसम्मतरुपले नै भएको हो । जुनकुरा महासचिव कमरेडले पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । पार्टीका प्रवक्ता कमरेडले पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मान्दिन भन्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्रीजीले मान्नुहुन्छ । तपाईंहरुले एक दुई दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ । उहाँले मान्नैपर्छ । उहाँले मान्नुहुन्छ ।
युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने कुरा के हुन्छ ?
अर्थमन्त्री हुनलाई राष्ट्रियसभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाका अनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगए पनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
गौतमलाई सांसद बनाउने र खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने काम सँगसँगै हुन्छ ?
त्यो प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने । तर, राष्ट्रियसभाको सिटमा भने वामदेव गौतम नै जानुहुन्छ ।
संविधान संशोधन गरेर गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा के हो ?
अब त्यो शर्त हट्यो । अस्तिको बैठकबाट संविधान संशोधनको शर्तमा मात्रै राष्ट्रियसभामा जाने नभएर संविधान आफ्नो प्रक्रियामा हुँदै जाने कुरा हो । राष्ट्रियसभा चाहिँ अहिले नै जाने भनेर हामीले त्यसरी निर्णय गरेका छौं ।
राष्ट्रियसभामा संख्या थप्ने कुरा के हो ?
अहिले त्यस्तो केही छैन । हामीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेका छैनौं ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभएन भने के हुन्छ ?
उहाँले सिफारिस नगर्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । उहाँले गर्नुहुन्छ । गर्नुभएन भने के भन्नेतिर म जानै चाहन्नँ । मलाई विश्वास छ, उहाँले पार्टीले सर्वसम्मत आफैं उहाँ र मेरो दुईजनाको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा गरेको निर्णयलाई उहाँले अवज्ञा गर्नुहुन्छ भनेर म कल्पना पनि सक्दिनँ । कसैले पनि कल्पना गर्न पनि हुँदैन ।
तपाईंले यसो भन्ने । प्रधानमन्त्रीले म गर्दै गर्दिनँ भन्ने । पार्टीमा बबण्डर त मच्चिइसक्यो त ?
उहाँले गर्नुहुन्छ । २०-२१ गतेसम्म तपाईंहरुले देख्नुहुन्छ । मैले भनिहालेँ ।
व्यवसायीहरुसँग यहाँको बैठक बस्यो र पुनः वामदेवलाई अगाडि सारियो भन्ने खबर पनि आइरहेको छ नि ?
त्यो त कपोलकल्पित चाहिँ हल्ला मात्र हो । कुनै बैठक मेरो कसैसँग भएको छैन । मिडियामा जे प्रचार गरिएको छ, त्यो नियोजित छ । भ्रामक छ । कपोलकल्पित छ । त्यस्तो कहिँ बैठक भएको या डिनर गरेको कसैले प्रमाणित गरिदियो भने म त्यसलाई बधाई भन्ने छु ।
यहाँले व्यवसायी भेट्नुभयो रे । त्यसैले विहीबार प्रधानमन्त्रीले शेखर कोइरालालाई भेट्नुभयो भन्ने छ नि ?
होइन, अब यो देउवाजीसँग प्रधानमन्त्रीले भेट्ने, मैले भेट्ने, शेखरसँग प्रधानमन्त्रीले भेट्ने, मैले भेट्ने यो सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो ।
आशंका त भयो नि ?
होइन, आशंका गर्नुपर्ने कुरै छैन । स्वभाविकरुपले भेटघाट भइराख्छ । हामी तीनजना पनि देउवा, प्रधानमन्त्री र मेरो पनि संयुक्तरुपमा धेरैपटक बैठकहरु भएका छन् । यो सामान्य प्रक्रिया मात्रै हो । त्यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
जनताले वामदेवलाई हराए । पुनः पार्टीले किन लान लागेको ?
त्यस्तो त नेपालमा, संसारभरिको इतिहासमा पनि हुन्छ । पहिला हराएकोलाई मैले धेरै अगाडि ल्याएर के के गरेँ भन्ने तपाईंहरुले थाहा पाउनु भएकै छ । त्यसकारण त्यो हुन्छ । इतिहासतिर जानु परेन । चुनाव हार्ने र जित्ने भन्ने धेरै कारणले काम गरेको हुन्छ ।
चुनाव हारेर पनि वामदेवजीलाई संसदमा लैजानेपर्ने । उहाँको शक्तिको स्रोत के होला ?
कुरा त्यस्तो पनि होइन । सचिवालयका सदस्यहरुमध्ये अब वामदेवजी मात्रै एकजना संघीय संसदमा हुनुभएन ।
यसअघि निर्वाचनमा पनि लैजान सकिन्थ्यो होला ?
लान सकिन्थ्यो । त्यतिबेला वामदेवजी तयार हुनुभएन । अहिले वामदेवजी तयार हुनुभयो । लाने भइयो ।
(शुक्रबार बिहान चितवन पुगेका प्रचण्डसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी)